Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Ikhtiyaarada Dal-ku-galka Cusub ee Dalxiiska ayaa Korin kara Dalxiiska GCC
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Bixinta shaqaalaha ajaanibka ah, kuwaas oo u qalma, fiisaha degenaanshada si ay u joogaan meel ka baxsan noloshooda shaqada iyo soo bandhigida taxane ah oo ah fursadaha fiisaha cusub ee kale waxay fure u noqon doonaan dalxiiska waxayna siin doontaa dhiirigelin soo jiidasho, dhaqdhaqaaqyo iyo goobaha madadaalada. Tani waxay noqon doontaa mid ka mid ah mawduucyada lagaga hadlayo Suuqa Safarka Carabta (ATM), 2022, oo dhacaya Maajo 8-11.
ARIVAL Dubai @ ATM si ay diiradda u saarto fursadaha fiisaha dibedda ee cusub, taas oo siin karta kor u qaadida dhacdooyinka gobolka, soo jiidashada, nashaadaadka, iyo goobaha madadaalada.
Booqashada qoyska iyo saaxiibada hawlgabka waxay kaa caawin doontaa in la hagaajiyo meelaha ugu sarreeya iyo biyo-mareennada xilliyada safarka baahida sare iyo hooseysa.
Waaxda duulista ee khaliijka si ay uga faa'iidaysato suuqyada caalamka oo lagu qiimeeyay $254 bilyan.
ARIVAL Dubai @ ATM waxay horumarisaa abuurista waayo-aragnimada halka-marista iyadoo siinaya aragtiyo iyo bulsho abuurayaasha iyo iibiyaasha dalxiisyada, nashaadaadka iyo soo jiidashada. Waxay baartaa isbeddellada hadda iyo mustaqbalka waxayna diiradda saartaa ganacsiga kobcinta suuqgeyn, tignoolajiyada, qaybinta, hoggaanka fikirka, iyo isku xirka heerka fulinta.
Waxaa lagu qiyaasaa in hadda ay jiraan in ka badan 35 milyan oo shaqaale ajaanib ah oo ku sugan wadamada GCC waxaana jiri kara qayb laxaad leh oo ka mid ah bulshada cadaanka ah, kuwaas oo laga yaabo inay rabaan inay ka fariistaan ​​GCC, xitaa haddii ay tahay kaliya wakhti gaaban. .
"Iyadoo habka iyo wakhtiga ay gacmahooda ku jiraan, waxay noqon lahayd wax dabiici ah, maaha oo kaliya kuwan hawlgabka ah inay safraan, laakiin sidoo kale inay qaabilaan qoyska iyo asxaabta. Duulimaadyada, hoteellada, meelaha lagu tago iyo meelaha kale ee madadaalada, dhammaantood waxay ka faa'iidaystaan ​​dakhligan dheeraadka ah ee sida caadiga ah laga yaabo inuu lumo, haddii dadka hawlgabka ah ay ku noqdaan dalalkoodii," ayuu yidhi. Danielle Curtis, Agaasimaha Bandhiga ME, Suuqa Safarka Carabta.
"Intaa waxaa dheer, waa wax aan macquul ahayn in laba ka mid ah suuqyada quudinta ugu sarreeya ee Dubai 2019, India oo leh laba milyan oo booqasho ah iyo UK, oo ay ku jiraan 1.2 milyan oo soo booqde ah ay leeyihiin bulshooyin ku nool UAE, oo ah 2.6 milyan iyo 120,000 siday u kala horreeyaan."
Dareenka suurtagalka ah, Dalxiiska Dubai oo kaashanaya Agaasinka Guud ee Deganaanshaha iyo Arrimaha Ajaanibka (GDRFA-Dubai), ayaa durba bilaabay hindise la yiraahdo "Retire in Dubai," oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee gobolka, qaab wax ku ool ah oo leh ugu yaraan shuruudaha maaliyadeed, oo ay dadka deggan Dubai ee ku dhow da'da hawlgabka, ay ku dalban karaan fiisaha hawlgabka ee shanta sano ee la cusboonaysiin karo.
"Haddii hindisahan uu guuleysto, waxay aad ugu badan tahay in waddammada kale ee GCC ay mar uun raaci doonaan. Qurbajoogta hawlgabka ah waxay shaki la'aan si weyn uga qayb qaadan doonaan qaybta dalxiiska, helista qoyska iyo asxaabta iyo sii wadida ku raaxaysiga qaab nololeed tayo leh oo ay caadaysteen,” ayuu raaciyay Curtis.
Qiimaha $254 bilyan adduunka oo dhan sanadka 2019, dalxiisyada, nashaadaadka, iyo qaybta soo jiidashada ee safarka iyo dalxiiska kaliya maaha qaybta saddexaad ee ugu weyn safarka; waa sababta ay dad badani u safraan marka hore. Bixinta kaliya ee kicinta noocan oo kale ah waxay noqon doontaa dhacdooyin iyo soo jiidasho, sida Expo 2020, FIFA World Cup 2022 ee Qatar, Ain Dubai, iyo sidoo kale soo jiidashada dalxiiska ee Saudi Arabia iyo quruxda dabiiciga ah ee Cumaan.
Hadda oo ku jirta sannadkii 29-aad iyo la shaqaynta iyada oo la kaashanaysa Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Dubai (DWTC) iyo Waaxda Dalxiiska iyo Suuqgeynta Ganacsiga ee Dubai (DTCM), dhacdada, bandhigyada muhiimka ah ee 2022 waxaa ka mid noqon doona, iyo kuwo kale, shirarka meelaha diiradda lagu saarayo suuqyada muhiimka ah Sacuudiga, Ruushka, Shiinaha iyo Hindiya.
Socdaal hore u socod, dhacdada hormuudka ah ee caalamiga ah ee tignoolajiyada safarka taasoo iftiimisa tignoolajiyada ugu dambeeyay, jiilka soo socda ee safarka iyo martigelinta, golayaasha iibsada ATM iyo dhacdooyinka isku xidhka xawaaraha.
ATM 2022 waxa kale oo ay martigelin doontaa shirar shirwayne oo go'an oo ku saabsan Marxaladda Caalamiga ah, oo daboolaya duulista, hudheelada, dalxiiska ciyaaraha, dalxiiska tafaariiqda iyo seminaarka maalgashiga martigelinta ee gaarka ah. Ururka Socdaalka Ganacsiga Caalamiga ah (GBTA), oo ah ururka ganacsiga ugu horreeya ee socdaalka iyo shirarka ganacsiga, ayaa mar kale ka qaybgeli doona ATM-ka. GBTA waxay bixin doontaa nuxurkii ugu dambeeyay ee safarka ganacsiga, cilmi baarista iyo waxbarashada si loo kiciyo soo kabashada iyo taageerada kobaca safarka ganacsiga. Iyadoo lala kaashanayo "Arival the in-destination voice," ATM wuxuu socon doonaa shir maalin nus ah May 8 ama Maalinta 1 ee ATM-ka.
ATM-ku wuxuu door muhiim ah ka ciyaari doonaa usbuuca safarka Carabta, xaflad munaasabado ah oo loogu talagalay xirfadlayaasha safarka ee adduunka oo dhan, si ay isaga kaashadaan una qaabeeyaan soo kabashada warshadaha safarka ee Bariga Dhexe, iyada oo loo marayo bandhigyo, shirar, khubaro kooban oo quraac ah, abaal-marinno, soo-saarid alaab iyo dhacdooyinka isku xirka.
Kadib 2021, ATM Virtual waxa uu marlabaad ka dhici doona gudaha todobaadka socdaalka carabta si uu u dhamaystiro bandhiga ATM-ka ee tooska ah. Iyada oo leh barnaamij ballaaran oo heer sare ah oo webinars ah iyo jadwal buuxa oo shirar muuqaal ah oo ay heli karaan soo-bandhigeyaasha iibsadayaasha muhiimka ah ee adduunka oo dhan.
Ku saabsan Suuqa Safarka Carabta (ATM)
Suuqa Safarka Carabta (ATM), oo hadda ku jira sannadkiisii ​​29-aad, ayaa hormuud u ah, socdaalka caalamiga ah iyo dhacdada dalxiiska ee Bariga Dhexe ee khubarada dalxiiska ee gudaha iyo dibedda ka baxaya. ATM 2021 ayaa soo bandhigay in ka badan 1,300 shirkadood oo soo bandhigaya 62 waddan oo ku yaal sagaal hoolal oo ku yaal Xarunta Ganacsiga Adduunka ee Dubai, iyada oo ay soo booqdeen in ka badan 140 waddan afartii maalmood. Suuqa Socdaalka Carabta waa qayb ka mid ah toddobaadka socdaalka Carabta. #Fikradaha halkan ku gaadh
eTurboNews wuxuu bahwadaag la yahay ATM.